INGCEBISO YE-30SEC: MUSA UKUZENZA OMNYE UMNTU - IMVELISO
I-30sec Ingcebiso: Musa ukuzenza omnye umntu
Ukuzenza ngathi ungomnye umntu uneendlela ezimbini ezimbi - utsala abantu ongabathandiyo kwaye awukwazi ukutsala abantu ongathanda ukuba phakathi kwabo.
Njengoko sihamba ebomini, sinethuba lokudibana nabantu abohlukeneyo. Abanye baba ngabantu nje esibaqhelileyo esibancuma size sibatshangatshangise xa sibabona kwaye abanye abayifanelanga ingcinga yesibini emva kokuba bephumile ngomnyango, kodwa abambalwa abakhethiweyo baya kuyenza ibe sisangqa sangaphakathi kwaye babe ngabahlobo.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zabahlobo, nangona kunjalo, kwaye ihlala ithatha ixesha ukumisela ukuba umntu onomdla wokuchitha ixesha kunye naye ngumhlobo wokwenene okanye hayi. Ngokuqinisekileyo, kulungile ukwazi abantu abatsha, kwaye ungonwabela kakhulu ukuxhoma kunye neqela elithile ngeempelaveki, kodwa uziva njani xa ukunye nabo? Ngaba bayakuphakamisa, okanye bakubeke phantsi? Ngaba umntu ohamba naye eklabhini ngolwesiHlanu ebusuku angakutyelela ukuba uyagula nyani? Kuthekani ngokukhupha ibanjwa ejele? Ngaba bangaza nawe ukuza kusasaza iindaba ezimbi kusapho lwakho, okanye bakulungele ukuya kwipikniki ezinzulwini zobusuku kuba?
Makhe sijonge kwiimpawu ezimbalwa zabahlobo abaqinileyo, abamangalisayo.
Ngaba uchitha ixesha nabahlobo ababi? Nazi iindlela ezi-5 zabahlobo bokwenene
ukuba bekukho abantu abali-100 emhlabeni
indlela yokuvula imoto ngaphandle kwezitshixo
ungabuthiyi njani ubomi bakho
ulufumana njani uthando lwakho kunye nenjongo
indlela yokubamba incoko
Indlela Yokuphila Yezilwanyana Kuchaphulo Olu Abantu Kubudlelwane Ubudlelwane Sebenza